မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Andriod အသုံးပြုသူတွေအတွက် ဖတ်ထားသင့် သိထားသင့်တဲ့ Android Users Gide (မြန်မာ) စာအုပ်ကလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အခြေခံကစရေးသားထားပြီး ပါဝင်တဲ့ အခန်းတွေကတော့....
1. Android ဆိုတာဘာလဲ
2. Root ဆိုတာဘာလဲ
> 1.Samsung ဖုန်းများအား Root ပြုလုပ်ခြင်း
> 2. Huawei ဖုန်းများအား Root ပြုလုပ်ခြင်း
> 3. HTC ဖုန်းများအား Root ပြုလုပ်ခြင်း
> 4. Sony ဖုန်းများအား Root ပြုလုပ်ခြင်း
> 5. LG ဖုန်းများအား Root ပြုလုပ်ခြင်း
3. CWM Recovery ဆိုတာဘာလဲ
> 1. Samsung ဖုန်းများအား CMW Recovery ပြုလုပ်ခြင်း
> 2. Huawei ဖုန်းများအား CMW Recovery ပြုလုပ်ခြင်း
> 3. HTC ဖုန်းများအား CMW Recovery ပြုလုပ်ခြင်း
> 4. Sony ဖုန်းများအား CMW Recovery ပြုလုပ်ခြင်း
> 5. LG ဖုန်းများအား CMW Recovery ပြုလုပ်ခြင်း
4. Custom ROM ဆိုတာဘာလဲ
> 1. Samsung ဖုန်းများအား Custom ROM တင်ခြင်း
> 2. Huawei ဖုန်းများအား Custom ROM တင်ခြင်း
> 3. HTC ဖုန်းများအား Custom ROM တင်ခြင်း
> 4. Sony ဖုန်းများအား Custom ROM တင်ခြင်း
> 5. LG ဖုန်းများအား Custom ROM တင်ခြင်း
5. Custom Rom များအခမဲ့ ရယူနိုင်သော ၀က်ဆိုဒ်များ
6. Application & Game များအခမဲ့ ရယူနိုင်သော ၀က်ဆိုဒ်များ
စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်... လေ့လာလိုတဲ့ ဘော်ဒါများအတွက် Dropbox, Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... Website တစ်ခုကို Android Phone တွင်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Application တစ်ခု ဖန်တီးနည်း မြန်မာလို စာအုပ်ကလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... မိတ်ဆွေကြီး Pyae Phyo (MMiTD) ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ပါ.... စာမြည်းဖတ်နိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို ဖော်ပြပေးထားပြီး လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Minus, Dropbox နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... မိုဘိုင်းမျိုးစုံ Root လုပ်နည်းနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ စာအုပ်ကို ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ Pyae Phyo (MMiTD) မှာတင်ထားတာလေးတွေ့လို့  ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... လေ့လာလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အတွက် Mediafire နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... သန်းထိုက် (ရွှေရိပ်) ရေးသားထားသော Android ပေါ်မှလက်တွေ့ သုံးနည်းပညာ (မြန်မာလို) စာအုပ်ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီစာအုပ်မှာ အခန်း(၈) ခန်းပါဝင်ပြီး အခန်း(၁) Android နှင့်လေ့လာသိသင့်စရာ အခန်း(၂) Android နှင့် အသုံးချ Setting ဆိုင်ရာ အခန်း(၃) Application ထည့်သွင်းနည်းများ အခန်း(၄) Root လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ပြုလုပ်ရခြင်းအကြောင်း အခန်း(၅) Custom ROM ကိုလေ့လာခြင်း အခန်း(၆) မသိမဖြစ်၊မရှိမဖြစ် Application များ အခန်း(၇) သိထားလေ့လာအဆင့်မြင့်နည်းပညာ အခန်း(၈) ကွန်ပြူတာတွင်တင်သုံးမယ့် Android OS တို့ဖြစ်ကြပါတယ်... လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire နှင့် Minus နှစ်နေရာ မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... သန်းထိုက်(ရွှေအရိပ်) ရေးသားပြုစုထားတဲ့ Mobile ကွန်ယက်နည်းပညာ စာအုပ်ကလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Mobile ကွန်ယက်နည်းပညာ စာအုပ်တွင် အခန်း (၆) ခန်းပါဝင်ပြီး ၄င်းကောင်းတို့မှာ အခန်း(၁) စတင်လေ့လာ Mobile နည်းပညာ အခန်း(၂) Mobile ချိတ်ဆက်ခြင်းနည်းပညာ အခန်း(၃) CDMA 800 နှင့်အသုံးချနည်းပညာ အခန်း(၄) GSM/ WCDMA နှင့်အသုံးချနည်းပညာ အခန်း(၅) Internet ဆိုင်ရာအသုံးချနည်းပညာ အခန်း(၆) Mobile တို့၏ လျှို့ဝှက် Key များ စသည်တို့ပါဝင်ပါတယ်.... ဒီစာအုပ်ကလေးကို ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ အမျိုးကောင်းသား မှာတင်ထားတာတွေ့လို့ ယူလာတာပါ... လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire မှတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
ဒစ်ဂျစ်တယ် ပစ္စည်း လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပြသနာဖြေရှင်းခြင်း (10.37 MB)
ဒစ်ဂျစ်တယ် ပစ္စည်း လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပြသနာဖြေရှင်းခြင်း
ရေးသားသူ itpalacecomputer at 1:25 AM
ခေါင်းစဉ် နည်းပညာ စာအုပ်များ